यसको अर्थ यस्तो हुनसक्छ-‘यो देश मेरो दुःखले मात्र बनेको होइन अर्थात मेरो दुःख त सामान्य हो। ठूलो कुरा त यो हामी सबैको/धेरैको ठूलो दुःख त्याग वा बलिदानबाट बनेको धेरै जातको फूलबारी हो भन्ने हामीले ख्याल राख्नुपर्छ। यसलाई हामी कसैले ख्याल ख्याल वा मेरो मात्र दुःख सम्झिनु हुन्न है।’ तर, दुनियाँले अर्कै बुझिदिए। भनियो पृथ्वी नारायणले त यसो पो भनेका थिए- ‘यो मेरो सानो दुःखले आर्जेको कहाँ हो र? मैले कति ठूलो दुःखले पो आर्जेको हुँ त।’ यो सन्दर्भ पनि अहिले यति नै ।
एकीकरणपछि पृथ्वीनारायणलाई पनि लागेको हुँदो हो, यो राज्य मैले नजोगाए कसले पो जोगाउला र? र उनीपछि उनका १२ पुस्ताका हरेकले यही ठाने होलान्! सताच्यूत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका बेला कुबेलाका कतिपय अभिव्यक्ति अहिले पनि यस्तै लाग्छन्- ‘म भएको भए यस्तो कहाँ हुन्थ्यो र? अझै मेरो विकल्प छैन।’
प्रकाशित मिति: मङ्गलबार, फागुन २२, २०७४ ०७:५०:४६